Netflix အပေါ် Charming ကဘာလဲ? ဘာကာတွန်းရုပ်ရှင်အကြောင်းကိုသိရန်အဘယျသို့ - Netflix ရုပ်ရှင်
Netflix အပေါ် Charming ကဘာလဲ?
What Is Charming Netflix About
BEVERLY HILLS, CA - ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈: ၂၀၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ Beverly Hills ရှိဖျော်ဖြေရေးဆိုင်ရာအနုပညာများအတွက် Wallis Annenberg စင်တာတွင် Graydon Carter ကတည်ခင်း Gray ည့်ခံသည့် 2016 Vanity Fair Oscar ပါတီသို့သရုပ်ဆောင်ဝီလ်မာ Valderrama (L) နှင့်အဆိုတော် Demi Lovato တို့ရောက်ရှိလာသည်။ (John Shearer / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
Jack the Ripper နှင့် Yorkshire Ripper အကြားခြားနားချက်များ Netflix ပေါ်ရှိ Sweet Home ကဘာလဲ။
ဘယ်အချိန်မှာ Charming ထွက်လာတာလဲ
အလွန်နှစ်သက်ဘွယ်ကောင်းသော ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ Aprilပြီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင်စပိန်နိုင်ငံတွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ထိုရုပ်ရှင်သည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးဥရောပနှင့်အာဖရိကတွင်ပြသခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်တွင် Netflix တွင်ပွဲထုတ်မည်။
ဒီရုပ်ရှင်မှာကြယ်တစ်ပွင့်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ဒါက '70 ပြရန် alum Wilmer Valderrama မင်းသား Charm အဖြစ်။ အဆိုပါသရုပ်ဆောင်အများအပြားနာမည်ကြီးအဆိုတော်တွေပါဝင်သည်! Demi Lovato သည် Lenore အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး Sia သည် Half-Oracle အမည်ရဇာတ်ကောင်တစ် ဦး အဖြစ်ပါဝင်သည်။ G.E.M. Sleeping Beauty and Ashley Tisdale သည်စင်ဒရဲလားတွင်ပါဝင်သည်။
ရုပ်ရှင်ထဲတွင် Nia Vardalos၊ John Cleese၊ Chris Harrison၊ Dee Bradley Baker၊ Carlos Alazraqui၊
ဤသည်ကာတွန်းဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်သူနှင့်တွေ့ဆုံတိုင်းမိန်းမကိုဂုဏ်အသရေရန်မိမိအဘ၏ရန်သူအားဖြင့်ကျိန်ဆဲသူမင်းသား Charming ၏ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြသည်။ သို့သော်မင်းသား Charming ၏ ၂၁ နှစ်မြောက်မွေးနေ့တွင်သူသည်သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအမှန်ကိုရှာမတွေ့လျှင်တိုင်းပြည်ရှိချစ်ခြင်းမေတ္တာအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။ ကျိန်စာကိုရပ်တန့်ရန်အတွက် Charming သည်မမျှော်လင့်သောမဟာမိတ်နှင့်ရှာရန်လိုသည်။
ရုပ်ရှင်ကိုအနီးကပ်ကြည့်ရှုရန်အတွက်အောက်ပါနောက်တွဲယာဉ်ကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ဒါဟာတကယ်တော့ပျော်စရာကောင်းတဲ့ဒဏ္likeာရီပုံပြင်တွေလိုပါပဲ။ အဲဒါကိုစဉ်းစားပါ ဝုဒ်သို့ ဒါပေမယ့်အားလုံးသီချင်းဆိုခြင်းမရှိဘဲ။
နောက်တစ်ခု:Netflix ရုပ်ရှင်: ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံး Netflix ပြဇာတ် ၅ ခု
netflix အပေါ်အကြား၏ရာသီ 3
ရာဇပလ္လင်၏ဂိမ်းရှိ Netflix မ
ယခု streaming netflix အပေါ်အကောင်းဆုံး
ဘယ်အချိန်မှာမွေးမြူရေးခြံ netflix အပေါ်ပြန်လာသနည်း
netflix လာမယ့်ကောင်းသောနေရာရာသီ3အခါ